न्युज २४ बाट बाहिरिए रवि, सिधाकुराको अन्तिम श्रृंखला आज « epurwa
न्युज २४ बाट बाहिरिए रवि, सिधाकुराको अन्तिम श्रृंखला आज
प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७७, बिहीबार १७:५३
झापा । चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजन छाडेका छन् । उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम विभागमा प्रमुख कार्यकारी निर्माता एवं प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत थिए ।
पाँच वर्षपछि न्युज २४ टेलिभिजनबाट बाहिरिएको लामिछानेले सामाजिक संजालमार्फत् नै पुष्टि गरिसकेका छन् । न्युज २४ टेलिभिजनमा प्रशारण हुदै आएको उनको सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रमको अन्तिम श्रृंखला आज रेकडेर्ड प्रशारण हुदैछ ।
सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका एक सदस्यका अनुसार लामिछाने आफ्नो टिमसहित न्यूज २४ बाट बाहिरिन लागेका हुन् । कार्यक्रम प्रोड्युसर दिपक बोहोर, सिनियर रिपोर्टर युवराज कडेँलले पनि न्यूज २४ छोडेका छन् । लामिछानेको नयाँ टिभी खोल्ने योजना छ । जुन केही महिनापछि प्रशारणमा आउने बताइएको छ ।
लामिछानेले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमलाई अझ परिस्कृत, सशक्त बनाएर पुनः दर्शकमाझ आउने बताए । ‘म मिडियाबाटै अलग्गिन खोजेको होइन । नयाँ योजनामा काम गरिरहेको छु’, लामिछानेले भने, ‘अझ फराकिलो, परिमार्जित, प्रभावकारी कार्यक्रम लिएर छिट्टै आउने छु ।’ कुन टिभी, कुन कार्यक्रम भन्नेबारे चाँडै जानकारी गराउने उनले बताए ।
नागरिक सरोकारका विषयमा खरो प्रस्तुतिका कारण जनमानसमा उनी निकै रुचाइएका छन् । सिधा कुरा जनतासँग चलाउने क्रममा उनले तालीसँगै गाली र अवरोध पनि झेलेका थिए । खासगरी नेपाल छोडेर अमेरिका भासिन खोजेको आरोप र पहिलो श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएको विषयमा उनले खुबै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । यद्यपि, फरक प्रस्तुति र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यामाथि रिपोर्टिङका कारण उनी आमनागरिकले सर्वाधिक रुचाएका प्रस्तोता हुन् ।
टेलिभिजनमा मात्रै नभएर युट्युबमा पनि उनको कार्यक्रम नेपालको हकमा सर्वाधिक हेरिन्छ ।
लामिछाने भदौ २०७६ मा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउसमेत परेका थिए । उनी पक्राउ पर्दा उनका हजारौँ समर्थकले सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए । तर, आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोप पुष्टि नभएपछि माघ २०७६ मा अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
लामिछाने टेलिभिजनका चर्चित मात्र नभई कीर्तिमानी प्रस्तोता पनि हुन् । उनले अप्रिल २०१३ मा न्युज २४ टेलिभिजनमार्फत निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय अन्तर्वार्ता गरी विश्व कीर्तिमान् बनाएका थिए ।
अर्जुनधारामा ‘एक साँझ शिवका माझ’
झापा । पूर्वको पशुपतिनाथ ‘अर्जुनधारा जलेश्वरधाम’मा यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा प्रदेश नं १ स्तरीय एकल ताण्डव नृत्य तथा गायन
झापा गाउँपालिकाका कृृषकहरु मकै खेतीमा आकर्षित
कुमरखोद । झापा गाउँपालिकाका अधिकांश किसानहरु यतिवेला मकै खेतीमा आकर्षित भएका छन् । पालिकाभरिको उर्वर जग्गामा अहिले जताततै किसानहरुले मकैवाली लगाएका
सुनसरीमा बोलेरोको ठक्करबाट एक व्यक्तिको मृत्यु
सुनसरी । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ का २५ बर्षीय डिगन गुरुङको बोलेरो गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ । बुधबार मध्येराती पौने
अदुवाको भाउ घटेपछि किसानमा निराशा
इलाम । अदुवाको भाउ घटेसँगै इलामका किसानमा निराशा देखिएको छ । गत वर्ष प्रतिमन (४० किलो) रु छ हजारसम्ममा बिक्री
ईपूर्व मिडिया प्रा. लि.
९८४९०७४९११ / ९८१५०२२२२०
सञ्चालक: नारायण अर्याल
सम्पादक: राजु पौडेल
सूचना विभाग दर्ता नं.८९८ - २०७५/ ०७६
न्यूज पोर्टलहरुको भीडबाट पूर्वमा उदाएको पोर्टल हो, ईपूर्व । स्थानीयता, विकास र परिवर्तनको उदय हो । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन खोज्नेहरुको सारथी र अन्याय, अनियमितता, भष्ट्राचार, विकृती–विसङ्गतीको अस्त हो । Read More
© 2021 epurwa